Muchidzidzo chino, tichaona musoro wenyaya wePossessive Pronouns saDein Mein muchiGerman. Kana uchirangarira muzvidzidzo zvedu zvekare, takaona zvisazitasingwi zvemunhu, painewo chirevhetemazwi (chazvinowanikwa) chemunhu mumwe nemumwe, uye muchidzidzo chino, tichazopa ruzivo pamusoro pezita rezvinhu.
Iye zvino, ngationei vhidhiyo yezvinyorwa zveGermany zvinyorwa zvizere uye tiite kuti tisiyane mienzaniso yedu.
Semuenzaniso wezvinotsanangurwa muvhidhiyo;
Iwe - Wako
Iye - Iye
Zvinokwanisika kupa mienzaniso yakadai seyo. Munhu ari kuruboshwe ndeye chirevo, kodzero ndiyo inowanikwa mutemo.
Possessive pronouns muGermany
Semuenzaniso, komputa yangu - dhesiki rako - mota yake, yangu-yako-mazwi ake mune tsanangudzo dzakadai seanezwi rekutaurira.
Nhaka yatinova nayo: ari Bruder
Nhaka yatinova nayo: ari Auto
Nhaka yatinova nayo: ari Mutter (amai)